तपाईंका पैतालामा यस्ता आकार त छैनन्, हुनुहुनेछ भाग्यशाली ! – Rapti Khabar
यी टिप्स अपनाउनुस्, हाँस्दा पनि घट्छ तौल !
खानपान र जीवनशैलीका कारण मानिसहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ । स्वास्थ्यलाई सन्तुलित राख्न आवश्यक छ । यसका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरिन्छ ।
मानिसहरु तन्दुरस्त तथा फिट हुन जिम जाने गर्छन्। तौल घटाउने अनि स्वस्थ रहने चाहना सबैलाई भए पनि जिम जाने समय सबैलाई नहुन सक्छ।
मोटोपन कम गर्न के गर्ने ?
-रक्तदान गनाले मानिसको शरीरको क्यालोरी भारी मात्रा बाहिर आउँछ । रक्तदानपछि प्रोटिन, रातो रक्तकोषहरु र अन्य तत्वहरु फेरि उत्पन्न हुनको लागि शरीरको एकदमै धेरै उर्जा खपत हुने गर्छ । जसकारण पनि शरीरको ल घट्छ । रक्तदानपछि मानिसको शरीरमा कमजोरी हुने गरेको कुरा तपाईंले पनि महसुस गर्नुभएको होला । यस्तो अवस्थामा शरीरको एकदमै धेरै क्यालोरी बर्न हुनेगर्छ ।
रिगंटा लागे २ मिनेटमा निको हुनेगरि यसरी गर्नुहोस उपचार
रिंगटा लाग्नु अर्थात चक्कर आउने समस्यालाई बोलीचालीको भाषामा टाउको घुमाउने भनिन्छ । यो समस्या प्राय मानिसले अनुभव गरेका हुन्छन् ।
अत्यधिक गर्मी हुदाँ, औषधीको असर हुदाँ, खानाको गडबढी लगायतका कारणले रिंगटा लाग्ने गर्दछ । यो समस्या कहिलेकाहि भए त यसको खासै असर हुदैन तर नियमित भएमा यो गम्भिर समस्या हुनसक्छ ।
यस्ता छन् प्याज काँचै खानुका ५ फाइदा
भान्सामा दैनिक रुपमा प्याज प्रयोग हुन्छ। कतिपयले तरकारी–अचारमा प्याज हाल्छन् त कतिले सलादको रुपमा काँचै खान मन पराउँछन्।
१) प्याजमा पाइने फस्फोरस, म्याग्नेसियम, पोटासियम र भिटामिन सी ले हाम्रो शरीरलाई निरोगी बनाउन मद्दत पुग्छ। दिउँसोको खानाको साथमा सलादको रुपमा काँचो प्याज खाँदा पाचन शक्तिमा सहयोग पुग्छ।
५) काँचो प्याज अनुहारका लागि पनि उपयोगी हुन्छ। काँचो प्याज लगाउने हो भने केही समयमै अनुहारको दाग हटेर जान्छ। साथै काँचो प्याजको सेवनले शरीरमा ब्लड सर्कुलेसन बढाउँछ र शरीरमा भएको ड्यामेज सेल रिपेयर गर्न मद्दत पुग्छ।
गर्मीमा त सबैजना तरतरी पसिना चुहाउँछन् नै र अत्यधिक पसिना चुहाउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायी नै हुन्छ । यसले शरीरमा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ र अनेकथरी रोगबाट बचाउँछ । व्यायाम गर्दा निस्कने पसिनाले झन् शरीरलाई धेरै फाइदा गर्छ । पसिना धेरै निस्कँदा हुने फाइदा निम्न बमोजिम छन् : १ छाला सफा पसिना […]
प्रत्येक मानिसको जीवनमा सफल हुने चाह रहेको हुन्छ र यसका लागि मानिसले मेहनत पनि गरिरहेको हुन्छ । कहिलेकाँही सही मार्गनिर्देशनको कमीले त्यो मेहनत बालुवामा पानि हालेसरी खेर जान्छ । हामी तपाईको मेहनत त्यसै खेर जानुहँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । त्यसैले सफलताको कामनासहित जीवनलाई कसरी सफल बनाउने भनेर हामीले दशवटा सुत्रहरु प्रस्तुत गरेका छौँ । यी […]